Madagascar: Khilaafaadka u dhexeeya dadka tuulada iyo shirkad macdanta laga helo - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA • DIB U EEGID AFRICAN PRESS Madagascar: Mucaaradka ka dhex socda dadka tuulada iyo shirkad macdanta ah
Madagascar: Mucaaradka ka dhex socda dadka tuulada iyo shirkad macdanta ah
ALEXIS WAYAN 8 May 2019
Xaaladda ayaa weli kacsan tahay inta u dhaxaysa bulshooyinka tuulada iyo shirkada macdanta Australian minus Base Toliara, oo ku yaalla koonfurta galbeed ee Madagascar. War saxaafadeed ay soo saartey Isniintii, 6 May, laba hay'adood oo bulshada rayidka ah ayaa difaacay dhulalka Malagasy oo loogu baaqay in la sii daayo sagaal tuhmane oo tuulo ah oo lagu eedeeyay in ay hoos u dhigeen xarumaha shirkadda. Qayb ka mid ah dadweynaha maxalliga ah ayaa si adag uga soo horjeeda mashruucan macdanta.
« Ku celinta iyo xadgudubyada xuquuqda beesha ee dhulkooda iyo kheyraadka dabiiciga ah Tani waa sida laba urur oo bulshada rayidka ah - CRAAD OI iyo TANY oo wadajir ah - waxay qeexayaan xiritaanka todobaadkii hore.
Iskudhaca udhaxeeya bulshooyinka tuulada ee saameeyay mashruuca iyo shirkada macdanta ayaa sii socday muddo bilo ah.
Dadweynaha, oo badidoodu ka mid yihiin beeraleyda, xoola-dhaqatada iyo kaluumeysatada, waxay cambaareeyeen saameynta xun ee ilaysiga ilmaniga ah ee caafimaadka iyo bey'ada iyo taas oo sababtay hab-nololeedkooda. Qaar kalena waxay diideen inay dalkooda siiyaan shirkadda.
Waxay ku jirtaa xaalad adag oo ah, 17 April, kuwan ugu dambeeyay waxay qabteen bandhig ay ku codsanayaan joojinta mashruuca macdanta. Dhacdadan ayaa kacday. Guryaha dhaadheer ee yaryar ayaa gubay goobta shirkadda ee Ranobe.
« Saddex qof ayaa la qabtay May 2, sagaal ayaa weli lagu hayaa meel aan la garaneyn ", Ayaa sheegay in bulshada rayidka ah. La xiriirka, gendarmaha qaranka ayaa tilmaamaya in sagaal tuulo ah ay ku jiraan xabsi ku yaalla degaanka Sakaraha, oo lagu eedeeyayBurburinta iskaa-wax-u-qabsiga iyo barafka waddada qaran ". Baaritaan wadajir ah oo ay sameeyaan bilayska iyo saraakiisha bilayska ayaa socda.
« Qofka kaliya ee ku andacoonaya falalka kharribaad ee ka dhanka ah mashruuca Base Toliara looma joojin, inkasta oo lagu arkay ficil ", Ayaa ka jawaabaya bulshada rayidka ah ee dalbanaysa in si deg deg ah loo sii daayo dadka tuulada, ixtiraamka xuquuqda ay u leeyihiin cadaaladda caddaaladda iyo caddaaladda, joojinta dhammaan cadaadiska marka loo eego dibad-baxayaasha taageeraya iyaga iyo qancinta dalabkooda.
Shanta degmo ee gobolka Tuléar ee koonfurta galbeed ee dalka ayaa saameeya mashruucan kaas oo ka hadlaya 2 500 hektar.
« Sharciga hadda jira wuxuu qeexayaa in dadka hareeraha haysta xuquuqda hantida ay ka leeyihiin dhulalka ay ka soo kicitimayeen dhowr sano oo ay ku noolyihiin bulshooyinka ay saameeyeen mashruuca Toliara Base, xitaa haddii aysan haysan dukumentiyada lahaanshaha dhulka. ", Ayaa sheegaya in sii deynta bulshada rayidka ah. isugeyn: http://www.rfi.fr/afrique/20190507-madagascar-ong-craad-oi-tany-tension-villageois-extraction-miniere-australienne-bas
Nidaamka lacag bixinta WhatsApp: Facebook wuxuu dooranayaa London
PAUL BIYA ayaa bixisay 1 DAMBE FCFA MUSLIMS